सडक सुरक्षा खोइ ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
सडक सुरक्षा खोइ ?
कार्तिक २५, २०७४ आशिष गजुरेल, गोविन्द भट्टराई
काठमाडौं — सडक र यातायातलाई विकासको पूर्वाधार मानिन्छ । हामी पूर्वाधार अभावमा छट्पटाइरहेका छौं । अझ भएका पूर्वाधारसमेत व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन र त्यसबाट उत्पन्न हुने हानि–नोक्सानी बेहोर्न बाध्य छौं । सडक र यातायात व्यवस्थापन आजको मुख्य चुनौती हो ।
त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विविध प्रयास विश्वव्यापी रूपमा भएका छन् । सोही सन्दर्भमा विश्वस्तरीय संघ संगठनहरूले विभिन्न नयाँ–नयाँ विधि प्रयोगमा ल्याएका छन् । पछिल्लो समयमा सुरक्षित सडक र यातायातका लागि ‘रोड सेफ्टी अडिट’ आसलाग्दो प्रयोग बन्न सक्ने देखिन्छ ।
नेपालका सडक र यातायातमा संलग्न भएको नाताले हामी दुईले गत महिना मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सडक महासंघ (ग्लोबल) द्वारा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसीमा सञ्चालन रोड सेफ्टी अडिटसम्बन्धी तालिममा सहभागी हुने मौका पाएका थियौं । विश्वका १२ देश तथा विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधिसमेत गरी २४ जना सहभागी तालिमको सन्दर्भमा यो लेख तयार पारेका छौं ।
अहिले काठमाडौंमा १० लाख हाराहारी सवारी साधनहहरू गुरिडरहेका छन् भने नेपालमा २० लाखको हाराहारीमा । यो संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । सवारी साधनको संख्या नबढ्ने हो भने अहिलेको विद्यमान सडकले दीर्घकालीन रूपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छ । तर यो सम्भव छैन, गाडीको आयातमा रोक लगाउने अवस्था छैन । दिनप्रतिदिन सवारी साधन वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या फेरि आउनेछ । नेपालमा सडक सञ्जाल ८० हजार किमि छ जुन हाम्रा लागि अझ अपर्याप्त देखिन्छ । मोटरसाइकलको संख्या ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा छ, जुन हाम्रा लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
सडक सुरक्षामा सुधार गर्न मुख्य रूपमा चार प्रमुख विषयमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । सडक पूर्वाधारमा सुधार, सवारी साधनको उच्च प्राविधिक अवस्था, कानुनको परिपालन (सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन) र आपतकालीन उपचार । सडक सुरक्षाको मापदण्डअनुसारले बनाउनुपर्छ । यान्त्रिक गडबडी रोक्न सवारी समय–समयमा जाँच गराउनुपर्छ । शतप्रतिशत कन्डिसनको गाडी मात्र चलाउनुपर्छ । बिग्रिएको गाडी चलाउनु भनेको बिरामी मानिसलाई काम लगाउनुजस्तै हो । सवारी साधन कन्डिसनमा छ कि छैन भनेर सरकारी निकायले समय–समयमा जाँच गर्नुपर्छ ।
सडक प्रयोगकर्ता सबैलाई ट्राफिक ज्ञान आवश्यक छ । पैदलयात्रीले आकाशेपुललाई त्यति प्रयोग गर्दैनन् । यसको उपयोगिताबारे चेतना फैलाउन आवश्यक देखिन्छ । जेब्राक्रसिङबारे पनि कमैले ध्यान दिन्छन् । त्यसैले आज ट्राफिक शिक्षा अझै महत्त्वपूर्ण छ । दुर्घटनापछि उद्दार र आपतकालीन उपचार व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ । उद्दार कार्य र आपतकालीन उपचार जति चुस्त हुन्छ यसले मानवीय क्षति कम गर्न सघाउँछ । विकसित मुलुकमा आपतकालीन हेलिकप्टर र सवारी साधन तम्तयार राखिन्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन । मुख्य सडकका प्रयोगकर्ताहरू चालक, साइकलयात्री र पैदलयात्री हुन् । सडक सबैको साझा सम्पत्ति भएकाले सबैको उत्तिकै अधिकार हुन्छ । एक–अर्काको अधिकार हनन नहुने गरी कानुनको पालना गर्नुपर्छ । फुटपाथमा गरिने पार्किङ, राखिने पसलले पैदलयात्री सडकबाट हिँड्न बाध्य हुन्छन् । यसले पनि दुर्घटना गराइरहेका छन् । यसैले सडकमा गरिने पार्किङ र राखिने पसल हटाइनुपर्छ ।
इभान्स (सन् १९८२) का अनुसार वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन गरी कानुन कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने ४० प्रतिशत दुर्घटनामा कमी आउँछ । उनका अनुसार ट्राफिक कानुन लागू गर्ने तीन कदमहरू छन् । पहिलो, ट्राफिकसम्बन्धी कानुन विकास गरेर पास गराउनुपर्छ । दोस्रो, यस्ता ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, जसले हरेक सडक प्रयोगकर्तालाई कानुन पालना गर्न बाध्य बनाउँछ । तेस्रो, यस्तो नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तथ्यांकहरूले देखाएअनुसार दुर्घटनास्थलको कारबाही नै प्रभावशाली हुन्छ । कानुन मिच्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ ताकि उसले यस्तो हर्कत नदोहोर्‍याओस् । विश्वका अधिकांश मुलुकले वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन अपनाउन थालिसकेका छन् । नेपालले पनि बेलैमा यस्तो व्यवस्थापन अपनाएर सडक दुर्घटना घटाउन अहम् भूमिका खेल्न ढिला गर्न हुन्न ।
रोड सफ्टी र उत्पादकत्व र यसबारेमा त आजसम्म हाम्रोबीचमा छलफलै भएको छैनभन्दा हुन्छ । आजसम्म पनि हामी दुर्घटनामा यति जना मरे र घाइते भए भन्ने मात्र सुन्छौं र सुनाउँछौं । हामी निमयित उद्दार, उपचार र कानुनी व्यवस्थामा मात्र संलग्न भएकाले कुनै पनि दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथ्यांक त के अनुमानसम्म गर्न सकेका छैनौं । ज्यान गुमाउनेको पारिवारिक व्यवस्थापन, काजकिरिया र परम्परागत कार्य, घाइतेको उद्दार र उपचार खर्च क्षतिपूर्ति, कुनै दुर्घटनापछि हुने चक्काजाम, तोडफोड र झैझगडा अनि त्यसले पुर्‍याउने क्षति, घाइतेको निगरानी र उपचार खर्च, अनि तिनको नियमित रेखदेख र स्याहार–सुसारजस्ता विषयमा त हामी कहिले संवेदनशील बन्ने होला ? हामी किन नेपाल विकास नभएको भन्दा, नेता खराब भएर भन्ने एकलकाटे र अवैज्ञाानिक जवाफ दिन्छौं । एउटा अनुमान गरौं त नेपालमा भएका ठूला सय दुर्घटना (वार्षिक) पछिको लफडामा ३ सय जना व्यक्ति २ दिन मात्र संलग्न रहे भने हाम्रो कति जनशक्ति खर्च हुन्छ होला ? तिनले गर्ने खर्चले कुनै सानो उद्योग खोल्न पो पुग्थ्यो कि ?
आज नेपालमा भएका पचासौं हजार घाइते र तिनको रेखदेखमा संलग्नले कति काम गर्थे होला ? अनि अर्थोपेडिक अस्पतालमा भएको लगानी, उपचार खर्च अनि कुरुवाको पीडा र खर्चको हिसाब खोइ ? त्यसबाट हाम्रो उत्पादकत्वमा कति असर परेको होला ? हामी त अनुमान गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा छौं ।
रोड सेफ्टी अडिट बेलायतबाट सन् १९८८ मा सुरु भएको हो । यसमा सडकमा सम्भावित दुर्घटना गराउने तत्त्वको निक्र्योल गरिन्छ र त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने सिफारिस गरिन्छ । यो अडिट गर्दा सडकमै गएर अवलोकन गरी दुर्घटना गराउने तत्त्व पत्ता लगाइन्छ । नयाँ सडक विकास गर्दा यसलाई योजना, निर्माण र निर्माण सकिएपछि अडिटिङ गरिन्छ भने चालु सडकमा पनि गरिन्छ । संसारका विकसित देशहरूमा रोड सेफ्टी अडिटले निकै महत्त्व पाएको छ किनकि संसारमा सडक दुर्घटनाबाट बर्सेनि १३ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । रोड सेफ्टी अडिट गर्दा मुख्यतया ८ वटा चरण हुन्छन् । पहिलो– परियोजना निक्र्योल गर्ने, दोस्रो– अडिट टोली बनाउने र टोली नेता चयन गर्ने, तेस्रो– अडिट गर्ने सडक खण्डमा निरीक्षण गर्ने, चौथो– निरीक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने, पाँचौं– प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण सम्बन्धित निकायलाई गर्ने, छैटांै– निकायहरूको राय सुझावअनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने, सातौं– प्रतिवेदनको सुझावअनुसार कार्यान्वयन गर्ने र अन्त्यमा मूल्यांकन गर्ने ।
रोड सेफ्टी अडिटका लागि विभिन्न पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूको टोली बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर हुनैपर्छ भने अरू सदस्यहरू कानुन, व्यवस्थापन, मनोवैज्ञानिक, प्रहरी, त्यस सडक खण्डका स्थानीयवासीका साथै अन्य सम्बन्धित विज्ञहरूसमेत समावेश गरिनुपर्छ । यसो गर्दा सबैको दृष्टिकोण आउँछ । सडक सुरक्षा भनेको प्राविधिक विषय मात्र नभएर सामाजिक, वातावरणीय, कानुन तथा व्यवस्थापन र अर्थसम्बन्धी विषय पनि हो । यस टोलीमा खालि इन्जिनियरहरू मात्र समावेश गरियो भने प्राविधिक पक्षहरू मात्र समेटिन्छ । अन्य क्षेत्रको पनि समेट्दा राम्रो र प्रभावकारी प्रतिवेदन बन्छ ।
नेपालमा रोड सेफ्टी अडिट हालसम्म सुरु गरिएको छैन । तर नेपालमा यसको धेरै आवश्यकता देखिन्छ । नेपालका सडक सञ्जालहरू सबै कम गुणस्तरका छन् । रोड सेफ्टी अडिट गरी हरेक सडकखण्डको दुर्घटना गराउने कारणहरू पत्ता लगाई त्यसको तुरुन्त सुधार गर्न जरुरी छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७४ ०८:५९
कार्तिक २५, २०७४ खेम बतास
काठमाडौं — गरिब बैकिनीको कुर्कुच्चाजस्तो उज्गलो१मा बस्दै आएको म कोदो हुागोसाइ२, कोदो ।
गरिब बैकिनीको कुर्कुच्चाजस्तो उज्गलो१मा
बस्दै आएको म कोदो हुा
गोसाइ२, कोदो ।
बौसको पूरापूर बालापन पोखेर
जोगाएको बीउको दर सन्तान हुा
मेरा पुर्खाको रगत–पसिनाले
निथ्रुक्क भिजेको छ
यो जमिन ।
तमले धानको बीउ
बडो मिहिनेतले रोप्नुहुन्छ
इराकको पानीसाग साटेर
बचाउनुहुन्छ उसको प्राणपखेरू
गाउाभरिका जवान हली–बाउसे
र, चार–चार हल बल्ल जोतेर
गर्नुहुन्छ गैरीखेतको रोपाइा ।
गोसाइले गहुा हुर्काउन पनि
कम्ता मिहिनेत गन्र्नुहुन्न
त्यत्रो मिहिनेतले त
भासु३मा पनि इन्द्रेणी पोखिन्थ्यो
उन्युमा पनि सुगन्ध भरिन्थ्यो
त्यत्रो मिहिनेतले त धुली४ र
कोल्टी पनि टुाडिखेल बनिसक्थ्यो
म त तमरा पानी नचल्ने हातले
बुर्की५ फालेझंै फालिएको उज्गलोको
कोदो हुा प्रभु, कोदो ।
मेरो धरामा अपि र सैपाल नै राखिदिए पनि
कहिल्यै चिस्यान आउादैन
मेरो बस्तीमा कर्णाली नै फर्काए पनि
कहिल्यै तिर्खा मर्दैन
मलामीले चौबाटोमा टीला फालेझौ फालिएको
कोदो हुा, कोदो ।
मैले तमरा भाडारको कल्पना त
कता हो कता
त्यो भान्साको मुखसमेत देखेको छैन
मेरा हड६ लागे पनि
पण्डितले अभिषेक छर्केझौ
छोडो हालेर भित्र पस्नुहुन्छ
मेरो रङले किन पूजा यज्ञमा बेदी पुजिादैन ?
म पनि यसै धर्तीको आदिवासी बाली हुा
हो, आदिवासी बाली ।
जहिल्यै खेतका फााटहरुमा तोरी फुलेको देख्छु
जहिल्यै खेतमा धानका बाला झुलेको देख्छु
जहिल्यै खेतका आलीमा भटमास नुहेको देख्छु
किन मलाई रोप्नुहुन्न
खलोकिनारकै मलिलो जमिनमा ?
मेरो जरामा कहिल्यै पोटास, युरिया नहाले पनि
मेरो जमिनमा कहिल्यै कम्पोस्ट नफाले पनि
म पनि कुनै दलहन र तेलहनभन्दा
कम तागतिलो छैन ।
एउटा कुरा भनौा ?
दु:ख नमान्नु होला
कोदोको रङ कालो हुन्छ
हो, म सक्कली रङ हुा माटोको ।
केही डोटेली शब्दको अर्थ
३=कैलालीको उत्तरी भागमा पर्ने पहाड,
४=बझाङको एउटा विकट गाउा,
५=मलामीले फाल्ने अन्न
प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७४ ०८:५८